Kukarukureta yokuzvidzora nokuputsa uriri zvokuvakisa
nzvimbo upamhi X
kureba mukamuri Y
The pasipasi ukobvu F
Kukarukureta yokuzvidzora munoenzanisa uriri
X - nzvimbo upamhi
Y - kureba mukamuri
Aite nokuyerwa kukwirira musiyano ina makona mukamuri, panguva pfungwa A, B, C, D.
Kuti vaite izvi, kushandisa chivako revarombo.
Isa shoma pakukora okuzvifunga munoenzanisa paburiro. kukura Izvi zvichakurukurwa kwaitika kureva rakadzikadzika zvokusvika mukamuri.
Somugumisiro, huwandu hunodiwa zvinhu munyika cubic metres uye akaisa nokukwirira panguva makona mukamuri zvichabviswa akaverenga.
Chirongwa anoona uwandu mashoko kuzvidzora munoenzanisa uriri kwakavakirwa mumhu musiyano panguva pamakona.
Uchakwanisa zvakanyatsorurama kuverenga mutengo nezvinhu.
The chikuru mukana kuzvidzora munoenzanisa pauriri kuti screed chaiyo, izvo akashandisa kusika munhu sandarara uye kumeso pose pasina zvakavabatsirei kwako. Ndokusaka mapuriro dzakadaro nhasi vakawana mukurumbira chaiyo.
Dururirai Mapuriro kunogona vakazvimiririra. Zvose kuti hunodiwa ndiko kuziva urefu uye upamhi mumba, nekukwirira kwayo pamakona, uyewo shoma pakukora ari mukaguta layer ipapo purogiramu yedu achakwanisa ngaaverenge vhoriyamu mashoko kuti zadza tichifunga inongoda.
Zvakanakira nemafashamo pamapuriro
1. Pemvura Vanhurume nevanhukadzi anoenzanirana, pasina vazvo kana maburi.
2. The upenyu yokuzvidzora munoenzanisa mapuriro anouya makore 40-50.
4. Havazivi zvinoda kutarisirwa.
Player filler uriri iri nyore, saka vazhinji vanosarudza kuzviita pachako pasina kushandisa unyanzvi. Asi pano pane vamwe subtleties.
Saka, usati watanga kuisa pasi unofanira kuzvigadzirira mukamuri. Kuti vaite izvi, bvisa yekare flooring, baseboards uye musuo. Uriri pemvura inoputswa. Izvi zvinogona kuitwa pachishandiswa chaiyo sanding muchina kana waya mumakwenzi. Zvadaro, kana paine makatsemuka pasi, ivo buritsa achishandisa mativi itsvedzerere.
Yeuka kuti kana uri kuenda vateye filler pamusoro emapuranga pauriri, inofanira yanyatsosimba chaiwo kuvapo afoot.
Zvadaro, achishandisa uriri slats kurereka angled kunoyerwa. Nezviyero izvi pamadziro wakaita chiratidzo, icho kukwirira pasi richadururwa. Panguva kureba ichi, uye ndinoiitawo 2.5 masendimita, masvingo vari kucheneswa kubva stucco nezvimwe okugadziridza zvokuvakisa.
Ipapo zvakare, paburiro riri vakachenesa uye degreased aine upfu chaiyo.
Zvino uriri dzichienderana mhinduro zvakazorwa makatsemuka uye crevices, smoothes hadzina kufambiswa zvakanaka. Pashure paizvozvo, uriri anofanira primed. Uye panguva mukugadzirira Danho iri rapera. Unogona kutanga kuisa pasi.
Kuisa uriri filler
Kudira uriri zvakaenderana kutora Assistant ndiani vanosanganisa mhinduro kusvikira iwe zadza.
Gadzira chigadzikiso maererano pasuru mirayiridzo. Kuti nzira yunifomu, regai muzadze tangi pakarepo dzose mvura. Uyu hombe chikamu. It vanokanya mhinduro. Kuti vaite izvi zvakanaka kushandisa wemagetsi chibooreso chaiwo kamwene. Uye chete kana kugadzirisa achatsausa kuva homogeneous simbi, ugodira mvura mairi.
Bonde chadururirwa nenhungamiro pamukova, kubva pakatarisana pakona kubva pasuo musha. Musanganiswa dzakadururwa muna migove, mumwe pashure nokuputsa pemvura ane spiked chinotenderera. Izvi zvinobatsira kuti kubvisa mhepo matema kuti mapinda mhinduro uye zvinopa yunifomu bemhapemha.
Achidira kubva mumwe mugove mumwe Nguva havafaniri kuva maminitsi anopfuura 10.
Padzinenge pasi, uye maawa 3-6 zvichienderana hachizi pamusoro mhinduro uye kudzivisa drafts mumba tembiricha kuchinja.